I-Ultrasonic Tissue Homogenizer - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonication iphephile & indlela ephumelelayo ye-tishu homogenization.
Izicelo ze-ultrasonic zihlanganisa izicubu zokulungiselela kanye nezimo zokuphefumula, ukukhipha amaprotheni, i-DNA / i-RNA nama-compounds asebenzayo, noma ukuvuselelwa / ukungasebenzi kwe-enzyme nemvubelo.
Ukulawula kahle kwe-ultrasound kuvumela ukulungiselela isampula okuhlosiwe.
I-homogenization yama-tishu iyinqubo yokulungiselela isampula lapho amaseli wesilwane nesitshalo noma ama-microorganisms ekulungiswa ngaphambi kokukhishwa kwendaba ye-intracellular njengama-protein, i-DNA noma i-RNA. I-membran yeseli kufanele iphulwe ukuze ikhulule okuqukethwe kweli cell. Ngemuva kokuphula udonga lwamaseli, ama-macromolecules angenangqamuzana athamela kwisisombululo se-buffer ukuze i-organelles, amaprotheni ne-DNA / i-RNA itholakale. Ama-homogenizers we-Ultrasonic namasilensi weseli ngamathuluzi asebenza kahle kakhulu cell ukuphazanyiswa, lysis futhi Ukukhipha.
Ukulungiselelwa okuningi kwesampula nge-sonication.
Ukusetshenziswa kwezicubu homogenizer
I-homogenizers ye-Ultrasonic isetshenziswa ngokujwayelekile ukuze izicubu zigaya, ukuphazanyiswa kwamaseli & i-lysis kanye ne-homogenization yamasampuli wezinto eziphilayo ngaphambi kokukhishwa kwendaba ye-intracellular kuleso sikhala samangqamuzana. Nge-sonication elawulwayo yamasampuli, zonke izinyathelo ezivela ku-lysis kuya kokukhipha kanye nokwenziwa kwe-homogenization zingenziwa ngokusebenzisa i-ultrasonic cell disruptor efanayo.
Inzuzo enkulu ye homogenizers ultrasonic ilele kalula amandla aguquguqukayo ukufaka nokuqina kwe-sonication. Ama-ultrasonic cell disruptors (i-lysers) avumela ukulawula amandla we-sonication ngokulungisa ukuphakama kusuka ku-20% ukuya ku-100%.
Ngaphandle kokusebenza okuqhubekayo, i-homogenizer ye-ultrasonic ingasethwa ukujikeleza imodi, isb for sonication of izicubu ezibucayi. I-Sonication kumodi ye-pulse kusho i-ultrasonicator edala amagagasi aphezulu kakhulu e-ultrasonic kumjikelezo wezinkathi. Ubude besikhathi sokunikezwa kwesikhathi kanye nesikhathi esithile kungenziwa kubekwe ngabanye ngabasebenzisi.
AT I-Sonication ene-Pulsed, phakathi nesikhathi sokuphumula, izinto eziphathekayo zingabuyela esimweni sayo sokuphumula futhi isampuli inganciphisa (usebenzisa isikhathi esithile sokushisa ukushisa). Ngaleyo ndlela, ukucubungula kahle kungasethwa ngokunembile ngokuhambisana nezicubu kanye nokushisa kwesampula okungadingeki kuncishisiwe.
Ama-homogenizers ama-ultrasonic amancane futhi asebenzise umsebenzisi ngenkathi eveza imiphumela enokwethenjelwa eqinisekisayo ukukhiqizwa kabusha ngenxa yokulawula okugcwele kuzo zonke izinqubo ezibalulekile zenqubo.
Izicelo ezivamile zezigaba ze-ultrasonic izicubu zokugaya, ukuphazanyiswa kwamangqamuzana, i-lysis, i-extraction kanye ne-homogenization zitholakala kuma-laboratories eziphilayo nezidakamizwa, i-microbiology, i-proteomic kanye ne-genomic ucwaningo (isib. Amaprotheni ukukhululwa ngaphambi kwe-Western blot kanye ne-enzyme-linked-immunosorbent assay), kodwa futhi ekukhiqizeni of ukukhishwa futhi amakhemikhali asebenzayo ngokuba izimboni zokudla, i-pharma nezimonyo.
Thola idivaysi ephezulu ye-ultrasonic yezidingo zakho
Hielscher ultrasonic izicubu homogenizers ziyatholakala nge ultrasound okukhipha uhla phakathi 50W kuya 16,000W (16kW).
Abasebenzi beLatroli bayathokozisa ngokusebenza okulula futhi okunembile kwama-homogenizers we-Hielscher's ultrasonic lab. Kuye ngezidingo ezithile, amadivaysi e-Hielscher afika ngokulawula kwe-digital noma analog.
I I-VialTweeter iyisetshenziswa esinamandla se-ultrasonic evumela ukuthi i-sonication yesikhathi esisodwa ibe nezikhumba ezifika ku-10 noma ama-tubes wokuhlola ngendlela efanayo. Ngenxa yokungena okungaqondile, ukungcola okuphambene nokuphulukiswa kwesampuli kugwenywe ngokuphelele. Ukuhlanza nokuhlanza kuncishiswe kuncishiswe ngenxa yokusetshenziswa kwezigqoko ezilahlwayo. I-sonotrode ye-block ikwazi ukuzenzekela.
Kububanzi be-probe-uhlobo lab ultrasonicators, amadivayisi angakhethwa 50W, 100W, 200W, 250W futhi 400W.
Ukuze uthole izinqubo ezinkulu, izinsizakalo ze-bench-top ultrasonic ziyatholakala nazo 500W, 1000W, 1500W futhi 2000W.
Futhi ngenxa yemifula ephezulu yamanzi, ama-ultrasonicators of 4000W, 10,000W noma 16,000W zihlanganiswa futhi ngaleyo ndlela zikwazi ukucubungula futhi zenze i-homogenize cishe yonke inani lezinhlamvu zeselula.
Izinzuzo ezinkulu ze-Ultrasonicators zakwaHielscher
ukugaya ngokushesha nokuphumelelayo, homogenization, lysis & ukuphazamiseka kweseli, noma ukukhishwa yi-cavitation enamandla e-ultrasonic
ukusetshenziswa okulula futhi enembile nokusebenza (khetha i-analog noma i-digital version)
ukuhlanza okulula kokusebenza komkhiqizo ngokususa i-sonotrode ngaphansi kwe-sonication (i-CIP ehlanzekile-in-place / i-SIP inzalo-in-place)
ibhokisi lokuvikelwa komsindo (ibhokisi lokuvikelwa komsindo lamadivaysi ebhubhu alenziwe ngokuphelele kusuka engilazini ye-acrylic ukuze kubonakale ngokugcwele kunoma iyiphi i-angle)
ukulawula okugcwele phezu kwemigomo yenqubo nge-digital touch-display kudivayisi (i-digital ultrasonicators) noma i-powermeter (yamadivayisi we-analog)
ukuhlanganiswa kokushisa kokushisa (okubalulekile ekushiseni okubucayi, amasampuli ama-labile)
Ukumiswa kwe-homogenization run kungachazwa ngokucacile futhi kulungiselelwe ngaphambilini kumenyu ye-digital
wonke amadivaysi edijithali afakwe ukurekhoda kwedatha okuzenzakalelayo (ku-SD / USB-ComboCard edidiyelwe), inzwa yokushisa ye-plugable kanye nesilawuli esikude sesiphequluli.
ukwelashwa okuningi kwesampula ne I-VialTweeter noma ngokusebenzisa i-sonotrodes engu-4- noma engu-8-umunwe (isb. ukuhlanganiswa kwezinqubo zebhobhobhothi yebholabhuthi)
izinhlelo zokusebenza ezincane nezinkulu
Chofoza lapha ukuze uthole izincomo zenkambiso ethile mayelana nokulungiselela isampula, i-homogenization yezicubu, i-lysis kanye ne-extraction (isb. Amangqamuzana, amabhaktheriya, ama-spores, ama-compounds asebenzayo)!
Ultrasonic izicubu homogenizer UP200St
I-ultrasonicators UP200Ht ne-UP200St zombili izinhlobo ezinamandla zama-hW200gen homogenizer zesampula se-prep, i-emulsation, ukusabalalisa, isizinda kanye ne-chemistry.
I-UP200Ht - I-Handheld Ultrasonic Homogenizer
UP200Ht – I-digital homogenizer ye-digital ultrasonic lab